FJKM MANARINTSOA : Hankalaza ny faha-70 taonany ny antoko mpihira Ny Koraita
Hanamarika ny faha-70 taona niorenany ny antoko mpihira Ny Koraita avy etsy anivon’ny fiangonana Fjkm Manarintsoa Finoana. 18 mai 2017
Ho fanamarihana izany dia hisy ny fampisehoana evanjelika hotontosain’izy ireo eny amin’ny fiangonana Manarintsoa Finoana, amin’ny 21 mey izao, amin’ny roa ora sy sasany. Ny maraina kosa dia hisy ny fanompoam-pivavahana arahina toriteny an-kira.
« Tamin’ny taona 1947 no niforona antoko mpihira Ny Koraita. Manana hira mahatratra 400 isa izy ireo. Gadon-kira maro no ataon’izy ireo fa isan’ny manavanana ny antoko mpihira kokoa ny vako-drazana ara-pilazantsara sy ny ireo hira ba gasy », araka ny fanazavan’ ny iray amin’ireo mpitarika ny fikambanana, Andriatsiferana. Fisantarana ny fankalazana ny hetsika ihany no hatao amin’ny alahady 21 mey eny amin’ny Fiangonana FJKM Manarintsoa. Ho fahatsiarovana ny fankalazana dia hisy ny famoahana ny rakikira fahadimy amin’io alahady io.
Mandritra ny ivon’ny fankalazana kosa dia hisy ny fampisehoana goavana hataon’ Ny Koraita izay hotronin’ireo ny antoko mpihira namana tahaka ny Ampifity Isotry fitiavana, Hosana Ambohijatovo fitiavana. Amin’ny 2 jolay izao etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina no hanatontosana izany.
Any amin’ny volana oktobra vao hifarana ny fankalazana, araka ny fanazavana hatrany.